सिन्धु विकास बैंक कम्पनी विश्लेषण - Aathikbazarnews.com सिन्धु विकास बैंक कम्पनी विश्लेषण -
बैंकको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बुधवार २० रुपैयाँले कमी आएको छ । बैंकको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ३७४ मा झरेको हो । बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. ३ करोड ५६ लाख ८३ हजार नाफा कमाएको छ ।
बैंकले गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. १ करोड ९७ लाख १७ हजार नाफा कमाएको थियो । नाफा गत आवको तुलनामा चालू आवमा ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफामा वृद्धि भएको हो ।
नाफामा वृद्धि भएसँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ । गत आवमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रु. ४ दशमलव ७२ रहेकामा चालू आवमा वृद्धि भएर रु. ८ दशमलव ५३ पुगेको हो । त्यसैगरी बैंकको वितरणयोग्य नाफामा पनि वृद्धि भएको छ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा रु. १ करोड ३८ लाख ९८ हजार रहेकामा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रु. ४ करोड १५ लाख ५५ हजार पुगेको हो ।
आजबाट अजोड इन्स्योरेन्सको आइपीओ बजारमा
सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम मौका